Xiqqoon nama xiqqeesit Kan Jedhan Dhugaa dha – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsXiqqoon nama xiqqeesit Kan Jedhan Dhugaa dha
Damee Boruu tin: Adoolessa 14, 2018
Umurii dheerachuun waan baayyee nama agrsiisa. Qabsoon bilisummaa Uummata Oromoo TPLF cabsee OPDOn hudhamee qabama jedhee takkaa yaadee hin beeku. Rakkinni qabsoo bilisummaa Uummata Oromoof yaroo hundaa kan gufuu itti tahee miila jalaa butu ayyaan ilaallatoota Oromoo akka tahe bareecheen hubadha. Dedeebisee akka uummatni keenya hubatuu gochuuf rakkina kana kaasaan ture. Har’a Ololli kijibaa OPDO fi waa’iloota isheen karaa qindaa’een Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo fi ABO irratti godhamu kan TPLFiin godhamaa turee caalaa dachaan tahee argamuun baayyeekan nama rifachiisu dha.
Sobaa xiqqoo yoo fakkeessanii soban utuudhuma mamanii amma tokko fudhachuun ni mala. Garuu dhugaa xiqqaa fi guddaan beeku maal haa baasuuf akka sobaan afuufuun barbaachisaa taha namaa hin galu. Warri OPDO kun of walaalan immoo Uummata Oromootu nu hin beekuu jedhanii yaadaa jiru? Hoiin OPDO guddaan TPLF jala deemtee haqa uummata Oromoo ukkamsuu fi ilmaan Oromoo qara tahaan barbaadee fixxuu akka tahe Uummata Oromoo jalaa dhokkataa miti. Namoota beekamoo fi jaalatamoo warra akka Jaatanii Ali, Daraara Kafane, Jagamaa Badaannee fi kan kummatamaan lakkawwan ajjeessaa fi ajjeessaa turte. Bara mootummaa cee’umsaa seenaan Badannoo waan dagatamu miti. TPLF nama ajjeeftee halayaa itti darbaa dokumantarii sobaa kaasuudhaan midiyaa ishee irratti maqaa ABO xurreessuuf itti gargaaramaa turuun ni yaadatama. Sana malee bakka adda addaatti ofii boombii darbanii karaa tokkoon ABO shorkokeessituu dha jechaa karaa biraa immoo isintu boombii darbe jettee ilmaan qulqulluu ajjeessaa fi mana hidhaa keessatti daraara turte. Shirri kun yaroof TPLF iif hojjetee jira taha. Muxxannoo fi shaakala tooftaa kana kan beeku ergamttu TPLF kan taate OPDO qofa. Hammeenya nama nagaa irratti raawwatanii ABO komachuun OPDOf waan haaraa miti. Waan haaraa godhu diraamaan kun TPLFiin hooggannamuu dhiisuu dowwa dha. OPDO lafaa akka suphee walitti sukkumee kan tolshe TPLF waan taheef tooftaa TPLF hundaa irraa barataa jiratte. Kanaafuu har’a nama lammii isaa biratti jaalatamaa tahe warra Geetachoo Addisuu ajjeesuudhaan ABOtu ajjeesse jechuun tooftaa harkatti moofa’ee ligidaa’e barkiinaan dhiqtee as baasaa jirti.
Waan hundaa caalaa kan sammuu koo na nyaachaa jiru: gaaffii Obbo Lammaa fi namicha jaanjaa’aa kan sammuu, onnee fi qaamnisaa boojuu tahe J. Birhanuu Juulaa jedhamu ABO waggaa 27 eessa turee? Jedhanii gaafatani dha. ABO akka OPDO seenaa mootummaa TPLF qofaa hin qabu. ABO umurii TPLF caalu qaba. Obbo Lammaaf immoo yoo xiqqaate abbaa taha. Waggaawwan kana hunda haqa Uummata Oromoo famalmachuun goota qaqqalii kummaatan aarsaa gochaa as gahe. Obbo Lammaa , gaaffa du’an arrabatu dura du’e jedha Oromoon.Akka nama uummata guddaaf tahe bulchaa jiruu tokko yoo dubbate si irraa bareeda. Akka ijaarsatti ABO wajjin wal dorgomuun akka sitti jabaatu naaf gala. ABOn laphee fi sammuu uuummata Oromoo keessa jira. Kaayyoo ABO namni jaalallee isaa hin wareegne hin jiru. Garuu karaa nama hin baafne irraa deemanii tasuma baduunis akka jiru hubachuun beekumsa.
Ilmaan Oromoo 40,000 ol mana hidhaa keessaan baasee jette dhaadatu kun ABO fi ilmaan ABO akka tahan hin dagatiin. Amma sanaa ol immoo adamsitanii mana hidhaatti akka guraa jirtan biyyatu beeka. Warra lubbuun jiran illee hiikne jettan. Garuu durumaa iyyuu waan haqa isaanii gaafataniif hidhamuu fi dararamuun barbaachisaa hin turre. Warra kumaatamaan ajjeeftan immoo ekeraan isaanii isin gaafata. Warri har’a achii buuteen isaanii hin baramiin kan akka Jaalewwaan Nadhii Gamadaa fi Dabsaa Guyyoo bakka hin godhatiin jira. Badii gooneef uummatni keenya dhiifa nuu godhee jira jedhee kan waakatu isin malee Uummatni Oromoo aangoo qabaatee karaa seeraa fi heeraa dhiifama isinii godhee hin jiru. Mana seeraa kam itti dhiyaatanii akka dhiifa argatan kan beeku isin qofa. Uummatni Oromoo guyyaan isin gaafatu ni dhufa. Yoo akkuma TPLF isinis abba irree taatanis Waaqqayyoo fi seenaa biratti gaafatamuun keessan waan hin oolle.
Har’a carraa seenaa tahe waan uummata keessanii fi biyyaa keessaniif nagaa fiduu irratti hojjechuuf ayyaana argatanii jirtu. Waan hundaa dura kanirratti xiyyeefatamuu qabu tahuu qabu nageenya uummata keenyaa fi tasgabii nannoo biyya keenya tahuu qaba natti fakkaata. Yoo haalla amma jiru kana keessatti aanggoof bololi’uun dhufe caalaa gara dhiiga wal dhangalaasuu fi walii gala nageenyaa gaafa Afrikaa booreessu dandeenya. Qabsoo uummatni Oromoo bilisummaaf gochaa jiru ija tufiin ilaaluun badii madaalamuu hin dandeenyeti nu geessuuf deema. Namoota aktivistoota jedhamanii diaspora irraa OPDOf qajeelfama kennaa jiru jedhaman, OPDO gara hin taane itti oofaa akka halayyaa irraa of darbittu gochaa jiru. Warri OPDOn beektota gootee jala deemaa jirtu kun kashilaboota jiruu fi jireenya isaanii iyyuu gaggeefachuu hin dandeenye akka tahan uummatni keenya hubachuu qaba.
Maqaa Itoophiyaa kana leelisuudhaan lapheen Habashootaa dhiita’ee gara bara abbaa lafaa durii uummata keenya deebisuu sirbaa jiru. Mirga xiqqoo uummatni keenya argatee jiru illee irraa sarbuu barbaadu. Abdii nama baafne galanii uummata walitti diruun aangoo bara dheeraa qabaachuuf nama hin gargaaru. Dhumni isaa jeeqamaa fi wal qabatanii baduu dha. Qabsoo ABO fi Uummatni Oromoo dhiiga isaan asiin gahe har’a OPDO fi warri Habashaa abbaa itti tahaa jirtu. Dhugaa akka isintti hin fakkaanne. Akkuma harree yoon an du’e margi hin margiin yoo jettu tahe itti fufaa. Ummatni Oromoo mirga hiree isaa ofiin murteefachuuf itti dhiigee, itti du’ee ,itti dararame argachuun haqa isaa ti. Humni Uummata Oromoo har’as tahe boru si achi cabsee bituu danda’u akka hin jirre waliif mirkaneessuun bareedhaa dha. Kanaafu baayyee dhama’uu isin baraachisu!
Isin barumaan OPDO arrabsaa amma OPDO iyyuu hin geessan. Waa’ee arrabsoo dhiistanii maaliigmf gara qabsoo Oromoo itti cimu hin yaadne? Sobdoota